beabob သည် Bavarian Pavilion Booth C14.4 တွင် NAB တွင်ပြသမည့် Premiere Ultra Compact 8436V ဘက်ထရီများပါ ၀ င်ခြင်း | NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » က Ultra Compact 14.4V ဘက်ထရီ Bavarian- အ Pavilion Booth C8436 အတွက် Display ကိုတွင် NAB မှာ pack မှာ Premiere မှ bebob
က Ultra Compact 14.4V ဘက်ထရီ Bavarian- အ Pavilion Booth C8436 အတွက် Display ကိုတွင် NAB မှာ pack မှာ Premiere မှ bebob
ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးပိုစွယ်စုံဂီယာဆီသို့စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အပြောင်းအရွေ့နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌, မြူးနစ်-based အာဏာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ bebob, Vmicro (V-တောင်ပေါ်မှာ) နှင့် Amicro (သဟဇာတရွှေ mount) 14.4V ဘက်ထရီကိုမိတ်ဆက်။ နှစ်ဦးစလုံးစတိုင်များ mount 43Wh, 98Wh နှင့် 147Wh ဗားရှင်း-တစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏အတန်းအစားထဲမှာနိမ့်ဆုံးအလေးချိန်နှင့်ခြေရာကိုအတူတစ်ရွေးချယ်မှုပါရှိပါတယ်။
အဆိုပါ V45micro နှင့် A45micro (43Wh) lithium-ion အထုပ်လယ်ပြင်၌အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးချင်းစီပဲ 11.6-အောင် / 0.33kg ချိန်။ ပိုကြီးတဲ့ output ကို V98 နှင့် A98micros တစ်ချောမွေ့ပြောင်လက် 19.4-အောင် / 0.55kg များမှာနေစဉ် V150 နှင့် A150micros 27.1-အောင် / 0.77kg ချိန်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းလိုင်း၏ကျန်ဖြည့်စွတ်ရန်သေးငယ်အရွယ်အစားနှင့် သာ. ကြီးမြတ်ဘက်စုံသုံးနှင့်အတူသစ်ကိုမိုက်ခရိုအားသွင်းမိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။
Vmicro နှင့် Amicro ဘက်ထရီများသည်ကင်မရာ၊ အလင်းရောင်နှင့်အခြားပါဝါပါ ၀ င်သည့် guzzlers များအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသူများမျှော်လင့်ထားသည့်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူထူးခြားသော bebob တီထွင်မှုများစွာရှိသည်။ ဘက်ထရီတစ်ခုစီ၏စမတ်ဘက်တွင်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုစောင့်ကြည့်သည့်အဆင့်ငါးဆင့်ရှိပြီးရောင်စုံ LED ပါဝါကျန်ရှိနေသေးသောအညွှန်း (၁၀၀ - ၈၀% မှ ၆၀% မှ ၄၀% မှ ၂၀%) ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ARRI, RED နှင့်မှ through-the-finder ပါဝါအချက်အလက်များ protocol ကိုအဆင်ပြေစွာပံ့ပိုးသည် Sony က ကင်မရာများ။ ပါဝါ gauge အောက်တွင်ပင်မိုက်အစုံပေါ်ဘက်ထရီပန်းကန်မှဘက်ထရီချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုသူများသည်ကိုတွေ့မြင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်နိုး-Up ဖို့ဘက်ထရီပါဝါ status ကိုစစ်ဆေးပါသို့မဟုတ် built-in နဲ့ LED light.This မသိမသာကွဲပြားသက်ဝင်စေဖို့ push-button ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝါဆက်စပ်ပစ္စည်းစေရန်, တစ်ဦးချင်းစီ Vmicro နှင့် Amicro ပေါ်ကနေဒြပ်စင်ထွက်စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်လျှောအဖုံးနှင့်အတူတစ်ဦးက USB port ဖြစ်သည်။ ကပ်လျက်သူတို့ရှေးခယျြဖြစ်စေဦးတည်ချက်အတွက်အသုံးပြုသူ cable ကိုအတွက် plug ခွင့်ပြုမယ့်ထူးခြားတဲ့လိမ် D-Tap output ကိုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုမိုက်ခရိုအများဆုံးဥတုလက်ရှိ 10A ဖြစ်ပါတယ်။ အားသွင်းရန်, bebob 2-ရုပ်သံလိုင်းနှင့်အမြင့်ဆုံးဘက်စုံများအတွက် 4-ရုပ်သံလိုင်းတစ်ပြိုင်နက်အားသွင်းအဖြစ်မြောက်မြားစွာဘက်ထရီပြား, ပါဝါအရက်ဆိုင်များနှင့် Adapter ကအပါအဝင်ဖြေရှင်းချက်၏၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ optional ဟော့လဲလှယ်ရေး adapter ဘက်ထရီအပြောင်းအလဲများကိုမှတဆင့်မပြတ်မတောက်ပါဝါပေး။
အဆိုပါ3"/ 75mm အမြင့်နှင့် 4" လူအပေါင်းတို့သည် Micro နဲ့ဘက်ထရီတွေရဲ့ / 101mm width ကိုတူညီကြသည်။ သာနက်ရှိုင်းသည့် 1.25Wh စွမ်းရည်များအတွက် 32Wh ဗားရှင်းနဲ့ 43 "/ 1.88mm ဘို့ / 48mm" ဟုအဆိုပါ 98Wh ထုပ်, 2.5 အပေါ် / 75mm အတိမ်အနက် "147 အတူ output ကိုအညီကွဲပြားခြားနားသည်။
အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များမှဂျာမနီမှာအင်ဂျင်နီယာနှင့် handcrafted, Amicro နှင့် Vmicro ထုပ်ရှည်သောအသက်အဘို့တည်ကြမ်းတမ်းပေါင်းစပ် House, ပါရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ modular ဆောက်လုပ်ရေးလွယ်ကူသောဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဆဲလ်စွမ်းရည်မလုံလောက်ဖြစ်လာသည့်အခါအလုပ်၏နှစ်ပေါင်းပြီးနောက် bebob ဘက်ထရီ re-cell ဖြစ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်ဒေသခံတစ်ဦးကုန်သည်အလည်အပတ်ခရီးတွေ့ရှိရန် www.bebob.tv
ရှေ့ bebob V45micro ဘက်ထရီ,
နောက်ကျော, V45micro ဘက်ထရီ bebob
ရှေ့ bebob V98micro ဘက်ထရီ,
နောက်ကျော, V98mico ဘက်ထရီ bebob
ရှေ့ bebob V150micro ဘက်ထရီ,
နောက်ကျော, V150micro ဘက်ထရီ bebob
ရှေ့ bebob A98micro ဘက်ထရီ,
နောက်ကျော, A98micro ဘက်ထရီ bebob
ရှေ့ bebob A150micro ဘက်ထရီ,
နောက်ကျော, A150micro ဘက်ထရီ bebob
ရှေ့ bebob A45micro ဘက်ထရီ,
နောက်ကျော, A45micro ဘက်ထရီ bebob
20 နှစ်အတွင်းများအတွက်ဆန်းသစ်ပါဝါဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ကင်မရာဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်မသိ, bebob ရဲ့ဂျာမန်လုပ်ရညျအသှေးသစ်ကို Vmicro နှင့် Amicro Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဘက်ထရီသို့တည်ဆောက်ထားသည်။ သောင်းချီ bebob ဘက်ထရီနှင့်အားသွင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ရုပ်ရှင်နဲ့ TV ကိုစတူဒီယိုမှာအသုံးပြုမှုအတွက်လက်ရှိဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အစဉ်အမြဲအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီ - က bebob ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံထဲမှာဒါမှမဟုတ်မြူးနစ်ဧရိယာ၌ရှေးခယျြထားပေးသွင်းမှာဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အစုစုကို V-တောင်မှာနှင့်ရွှေတောင်ပေါ်မှာသဟဇာတဘက်ထရီ, Micro နဲ့ဘက်ထရီ, Chargers, adapter, Hot လဲလှယ်ရေး adapter နှင့်ထို့ထက် ပို. ပါဝင်သည်။ bebob ရဲ့ groundbreaking နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ဟာကြမ်းတမ်းသေးအာကာသ-saving Vmicro နှင့် Amicro ဘက်ထရီကို၎င်း, Cube 1200, 1176Wh တစ်ဦးထူးကဲပါဝါစွမ်းရည်နဲ့ Multi-ဗို့အား Li-Ion ဘက်ထရီနှင့် built-in အားသွင်းပါဝင်သည်။ နှစ်တွေ bebob နေဆဲနီးပါးခိုငျမွဲဘက်ထရီ, အစားထိုးဆဲလ်တွေ, လှည့်ကွက် D-Tap နှင့် Cine V-တောင်မှာအပါအဝင်ယနေ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း features တွေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Lewis ကဆက်သွယ်ရေးများကပြင်ဆင်ပြန်ကြားရေး: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
DoPchoice သည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကိုပင် Cameo F-Series Fresnels သို့ထည့်သည် - ဧပြီလ 12, 2021
Creative Solutions သည် Gaming သို့တိုးချဲ့ရန်နှင့် Cloud Offering ကိုအားဖြည့်ရန် Lightstream ကိုရယူသည် - ဧပြီလ 12, 2021
ရုပ်ရှင်ပညာရှင် Alan Jacobsen သည် Outlier.org ကောလိပ်အတွက်ဆုချီးမြှင့်ထိုက်သောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည် - မတ်လ 31, 2021
ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံနှင့်မြှား က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-03-23
ယခင်: အသံရောနှောဘို့ K-Tek Stingray ကျောပိုးအိတ် LE NAB Booth C7933 မှာကြည့်ရှုပါ
နောက်တစ်ခု: နယူး K-Tek Stingray Utility ကိုက Hip Pack ကို